Thursday July 12, 2018 - 19:43:27 in Wararka by Super Admin
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa weerar dhiig badan ku daatay markale ka fuliyay gudaha wadanka Kenya ee dhaca Bariga qaaradda Afrika.
Gobolka NFD ayaa ku jira gumeysiga Kenya
Wararka ka imaanaya gobolka Gaarisa ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay cagta mariyeen saldhig ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Haameey oo hoos yimaad Libooya.
Dagaal muddo saacada ah socday ayaa gudaha deegaanka ku dhaxmaray labada dhinac, goob joogayaal ayaa sheegay in xoogaga Al Shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta Haameey iyo saldhigyadii ciidanka.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ay ku sheegtay in ay weerarka ku dishay ugu yaraan 3 sarkaal oo katirsan ciidamada Booliska Kenya islamarkaana ay ku qabsatay gaari nuuca dagaalka ah.
"Howlgal aad loo qorsheeyay ayay ciidamada Mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka Haameey ee gobolka Gaarisa, Mujaahidiintii weerarka qaaday waxaa usuurta gashay in ay qabsadaan saldhigyada ciidamada saliibiyiinta Kenya" ayaa lagu yiri warka Al Shabaab kasoo baxay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaga Al Shabaab ay deegaanka Haameey kasoo daabusheen saanado hub ah islamarkaana ay gubeen dhismaha shirkadda shirkadda isgaarsiinta Safaricom.
"Mujaahidiintu waxay dagaalka kusoo qaniimeysteen gaari dagaal iyo saanado melleteri sidoo kale waxay gubeen xarun isgaarsiineed oo dowladda saliibiyadda Kenya laheyd" ayaa lagu yiri war lagasii daayay Idaacadda Andalus.
Ilo wareedyo madax banaan waxay xaqiijinayaan in Al Shabaab ay muddo saacada ah gacanta ku hayeen deegaanka Haameey oo ku dhow Libooya Kenya, weerarkan ayaa ku biiraya silsilada weeraro ah oo muddooyinkii dambe ay lakulmeysay dowladda Kenya.
Tan iyo markii melleteriga Kenya ay toos ugusoo biireen duullaanka Soomaaliya sanaddii 2011 ayay xoogaga Al Shabaab dagaalka urareen dhanka gobollada Lamu iyo NFD oo Kenya ay ka heysato muslimiinta.